Michael Essien Oo Kashifay Xiddigii Chelsea Joogay ee Ku Qanciyay In Uu Iska Diido Man United Kuna Biiro Blues. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Michael Essien Oo Kashifay Xiddigii Chelsea Joogay ee Ku Qanciyay In Uu Iska Diido Man United Kuna Biiro Blues.
May 22, 2020 at 10:38 Michael Essien Oo Kashifay Xiddigii Chelsea Joogay ee Ku Qanciyay In Uu Iska Diido Man United Kuna Biiro Blues.2020-05-22T10:38:44+02:00 CAYAARAHA
Halyeeyga Kooxda chelsea ee Michael Essien ayaa qirtay in uu jeclaa in uu u ciyaaro kooxda Man United laakiin sheegay in uu diidi kari waayay kadib markii uu Didier Drogba u seegay in uu ku soo biiro Chelsea.
Xiddiga reer Ghana ayaa joogay kooxda Lyon markii uu dhexda u galay dagaal dhanka suuqa ah kooxaha chelsea iyo Man United iyada oo uu Sir Alex Ferguson u doonayay badalka Roy Keane.
United ayaa hogaaminaysay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga sanadkii 2005 laakiin Chelsea ayaa ku guulaystay saxiixa Michael Essien kaas oo London ku qaatay 9 sano oo uu kula guulaystay 8 koob.
Michael Essien ayaa haatan sheegay in uu Halyeeyga Chelsea ee Drogba door weyn ka qaatay go’aankii uu ugu soo biiray kooxda kadib markii uu dhawr jeer kala hadlay Telefoonka isaga iyo Mourinho.
“Sanadkaygii 2-aad ee Lyon markii aan dhamaystirnay xilli ciyaareedka waxa aan ku soo laabtay isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub markaas ayaana ahayd markii ay kooxuhu xiiso ii muujiyeen gaar ahaan kooxaha chelsea iyo Man United”ayuu Michael Essien yidhi.
“Markii hore waxa aan doonayay waliba jeclaa in aan ku biiro Man United laakiin markii aan hadlay Jose Mouirnho maalin walba waxa uu si cad iigu sheegay in uu doonayo in aan ku biiro chelsea waliba chelsea ayaa ahayd kooxda kaliya ee diyaarka u ahayd in ay bixiso lacagtii la igu iibinayay”.
“Ma ahayn go’aan fudud laakiin waan xanuustaa maalintii ugu horaysay ee aan la hadlay Mourinho waxa uu joogay guriga Drogba, isaga ayaana ila hadlay waxana uu mar walba iiga sheekayn jiray sida uu Jose Mourinho ii hadal hayo”.
“Ugu dambayn Drogba ayaa si joogto ah iila soo xidhiidhi jiray waxana uu igu qanciyay in aan iska diido Man United kana doorto Chelsea”
« Liverpool Oo Loo Sheegay Halka Wado Ee Ay Xiddigaha Salah, Mane & Firmino Uga Tagi Karaan Kooxda.
Maamulka Kim Jong-un: Gabar ku xirnaa xabsi ku yaalla Kooriyada Waqooyi oo la baxsaday askarigi ilaalinayey »